Technorati Rank WordPress Plugin Version 2 Waa la siidaayay! | Martech Zone
Technorati Rank WordPress Plugin Version 2 Waa la siidaayay!
Sabtida, Maarso 10, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Kulayl diiran caynkii ugu horreeyay ee Tiknolojiyadda Teknolojiyada, Waxaan dib u habeyn ku sameeyay waxa soo-saarka si aan uga dhigo CSS lagu wado (hoosta waa shaashad shaashad ah, waxaad la macaamili kartaa midka ku yaal barta dhinaceeda):
Midkani waxoogaa dhib badan ayuu ahaa in la soo saaro laakiin wax soo saarku aad buu u fiicanyahay. Marka hore, waxaan ka faa'iideystay wixii aan ku bartay Bittbox in la sameeyo mid kasta oo ka mid ah badhannada wax soo saarka ee sawirka ku jira Sawirka.
Tallaabada xigta waxay ahayd adeegsiga qaababka si dhab ah loo dhiso qof ka mid ah khariidada sawirka marka laga reebo inay dhab ahaantii jirto khariidad ma leh! Waa wax fiican, runtii. Waad dejin kartaa asalka guud ee div ka dibna abuuri kartaa mid kasta oo ka mid ah 'meelaha kulkulul' iyadoo la adeegsanayo meelaynta buuxda iyo CSS. Eeg soosaarka CSS.
Waxaan sidoo kale ku daray xiriirin cusub ee Technorati WTF bogga iyo cinwaanka RSS ee goobta. Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay! Waxaan u maleynayaa inay tahay horumar ballaaran oo ka yimid nooca koowaad! Waxaa jira ah i isku xidhka midigta hoose ee kor u qaadaya qalabka sidoo kale.
Tikniyoolajiyadda Xilligaan Nooca WordPress Plugin Version 2.0.4
Waa maxay dhexdhexaad dhexdhexaad ah?
Suuqgeynta Emailka ee Lambarada
Miyuu bittbox cabsi lahayn?
Ninyahow, boggaasi waa dhiirigelin.
Waa hubaal inay tahay! Waxaan in muddo ah raadinayay caawimaad sawirqaade. Uma isticmaalin si ku filan oo aan ku noqdo wax cajiib ah, sidaa darteed goob sida Bittbox ah ayaa waqti badan iga badbaadisa!
Waxaan isku dayey inaan rakibo ta ugu cusleyd uguna weyn raacitaanka tilmaamahaaga xagga "warqadda" 🙂
laakiin waxaan helay qaladka soo socda
Khalad dilaa ah: Lama dhaqaajin karo fasalka aan jirin: simplexmlelement in /home/winex4/public_html/wp-content/plugins/technorati-rank/technorati-rank.php on line 64
Taasi waa qalad markii SimpleXML la bilaabay, taas oo qayb ka ah PHP5. Serverkaagu ma leeyahay PHP5?
taasi ayaa i bari doonta inaan marka hore hubiyo .. sida muuqata Lunarpages-ku wuxuu socdaa 4.4.4 PHP
Waxaan qiyaasayaa inaan hubinayo nooca kale ama aan si adag u laalaadayo oo aan arko haddii ay kor u kaceen 5.0
Waxaan rajeynayaa inay sameeyaan! Laakiin sidoo kale waxaan rajeynayaa martidaada martigelinta. PHP5 runtii waxay keeneysaa waxqabadyo waxqabad aad ufiican oo aad ufiican, iyo waliba qalab wanaagsan oo loogu talagalay cunista API-yada. Waxaan adeegsadaa Jumpline, waxaad ku arki doontaa xiriiriye liistadayda kafaala qaadka ah boggeyga gurigayga. Waxaan sidoo kale aaminsanahay in Dotster uu leeyahay xoogaa VDS martigelin ah oo leh kii ugu dambeeyay uguna weynaa.
Mar 11, 2007 at 1: 16 AM
Waxaan la mid ahay dhibaato
Waxaan wacay martigaliyaheyga waxayna igu yiraahdeen adeegeygu wuxuu leeyahay PHP 4 iyo PHP 5, laakiin hadaan rabo inaan maamulo feyl anigoo adeegsanaya PHP 5, qoraalka waa inuu lahaadaa fidinta faylka .php5.
Marka… Waxaan badalay kordhinta feylka, wuuna ka baabayaa plugins-ka ku jira wordpress.
Mar 11, 2007 at 10: 10 AM
Wow - Ma hubo gabi ahaanba, BittBox. Aan jaleeco waxa Samanthon uu sameeyay si loogu beddelo nuqulkii ugu horreeyay PHP4.
Runtii waan layaabay inta martigaliyeyaal ah ee halkaa jooga oo aan haysan kuwii ugu dambeeyay uguna weynaa!
Waxaan doonayay inaan weydiiyo nooca kani isna orday!
Plugin Cajiib ah, Qaab dhismeed heer sare ah! Mahad Doug, iyo shaqo weyn. Xitaa xitaa kama aanan ogeyn tan hore, laakiin tani waxay ku socotaa dhinaceyga dhinaceeda.
Runtii waa abaalmarin in la arko in talooyinkeyga Sawiradu ay kaa caawiyeen inaad badhamadaada sameysato !!!!!
Mahadsanid, BittBox! Waxaan u maleynayaa inaan isha ku haayo qaabka, laakiin waligey uma muuqdo inaan saxo inta badan. Inaad karti u leedahay inaad soo dejiso shaybaarkaaga oo aad kala soocdo waa waxa keenaya farqiga. Waan awoodaa inaan runtii ku fuliyo fikradahaas hada. 🙂
Waxaan ku ciyaarayaa xoogaa feker ah oo ku saabsan cinwaanka maqaalkeyga iyo taariikhda soo socota.
Mar 13, 2007 at 5: 43 AM
Waa hagaag, Doug, waxay u muuqataa in nooca 2-aad plugin uu i neceb yahay. Waxaan helaa fariimo qalad ah:
In kasta oo ay jiraan farriimaha khaladka ah, waxay sidoo kale muujineysaa darajadayda Technorati (~ 26.5k: D). Aqoon uma lihi waxa ku saabsan PHP si aan u ogaado sababta ay uga ooyayaan hal faylkaas.
Waxaa xiiso leh oo ku filan, adeegeena, waxaan u adeegsanaa SuPHP, sidaa darteed wax walboo annaga ayey noo socdaan (marka shuruudaha chmod uma baahna faylasha adduunka lagu qoro, qoraalada php-na ma fulin doonaan haddii chmod'ed aad u sarreeyo, tusaale ahaan).
Dhamaan php-ka subdomain-kan wuxuu u shaqeeyaa sida php5.
Mar 13, 2007 at 7: 21 AM
Ma haysaa wp-content / kayd buugga Xial? Waxaan u maleynayay inay fiicnaan laheyd in la isticmaalo isla buugga kaydka ee WP-Cache. Marka dib loo eego, laga yaabee inaysan ahayn fikrad wanaagsan! Khadadkaasi waa hubaal in loo qoro feylka keydka.
Mar 14, 2007 at 8: 18 AM
Xaqiiqdii waan sameeyaa, Doug. Waxaan wadey WP-Cache in muddo ah. 🙂
Waxaan ahaa qof yar oo xiiso leh, sidoo kale, sababta ay uga caban laheyd tan, maadaama aan haysto hagaha loo baahan yahay, laakiin waxaan qiyaasayaa inay tahay wax kale gebi ahaanba.
Mar 14, 2007 at 8: 21 AM
Xog yar oo xiiso leh oo lagu daro:
Wali khaladaadkii ayey soo celinaysaa.
Apr 9, 2007 at 3: 59 AM
Kaliya waxaad rabtaa inaad ku dhex gasho adigoo isla khalad ah. Goobtu waxay maamushaa php5, oo badhanka ayaa soo bandhigaya.
Waxaan isku dayay inaan faallo ka bixiyo khadadka 121-123, furkuna si fiican buu u shaqeeyaa. Miyaan ku noolaan karaa, mise la'aanta khadadkaas ayaa dhib keeni doona mustaqbalka fog?
Mar 22, 2007 at 9: 19 AM
Waxaan helayaa khaladaad la mid ah kuwa kor ku xusan, sidoo kale waxaan u maleynayay inay ahayd cache dirkeyga laakiin waxaan haystaa mid sidoo kale waxaan hubiyey in xuquuqda qoristu sax tahay
Barta dhinaceeda waxay ku tusi doontaa fiilada (oo leh darajo) laakiin khaladaadkaas kor ku xusan.
Mar 22, 2007 at 9: 41 AM
Ma hubin kartaa inaad aragto inaad haysato nooca PHP 5+ oo CURL waa la shaqeysiiyay? Waxaad ku sameyn kartaa tan adoo ku dhisaya bog boggaaga <?php phpinfo(); ?> bogga. Kadib fur boggaas. Dusha sare ee bogga ayaa leh noocaaga PHP-ga waxaadna sameyn kartaa raadinta CURL si aad u hubiso inay karti leedahay.
Mar 23, 2007 at 5: 30 AM
Hagaag, Doug, waxaan laba-hubiyay nooca PHP-ga.
Waxaan ku socdaa PHP5, oo CURL ayaa lagu soo ururiyey (mid ka mid ah saddexda codsi ee caadiga ah martigaliyahayga, waxyaabaha lagu soo ururinayo PHP)
Wax kasta oo kale si fiican ayey u shaqeeyaan, laakiin si buuxda uma hubo sababta ay qalabkan u xejisan yahay, illaa ay tahay nooca cURL ee lagu soo ururiyey PHP (Waxaan joognaa 7.15.4, uguna dambaysay waxay u eg tahay 7.16.1). Si kastaba ha noqotee, ma doonayo inaan ku dhufto martigeyga si aan u soo ururiyo php5 mar kale taas, haddii aan caawin karo. <: 3
Mar 23, 2007 at 6: 46 AM
Waxaan si qoto dheer u eegi doonaa toddobaadkan. Waxay u socotaa iyada oo aan wax dhibaato ah ka jirin dhawr goobood - markaa waa mid ka mid ah 3 waxyaalood: 1. Cache, 2. cURL or 3. PHP Version.
Waan ka faa'iideysan karaa shaqeyntii hore ee PHP 4 si aan u soo jiito oo aan u faalloodo XML laakiin way yareyn kartaa xoogaa - waxaan tijaabinayaa toddobaadkan. Waan ku qanacsanahay dhammaan soo-jeedinta. "Houston, waxaan leenahay dhibaato!".
Apr 1, 2007 at 1: 25 PM
Kaliya qoraal: Technorati wuxuu bilaabay an Authority Xadhig
Sidoo kale - dhammaan kuwa dhibaatooyinka kala kulmaya qalabkan, runtii waxaan kugu dhiirigelin lahaa inaad u guurto marti-geliye cusub :). Waxaan haystaa 12 bilood oo bilaash ah oo bilaash ah aniga iyo martigaliyahaygu xagga hoose ee tayda About .
Apr 5, 2007 at 3: 06 PM
Shaqo weyn oo ku saabsan fiilada. Waxay ka shaqeysay 'sanduuqa' sanduuqa 'ee Jumpline waxaana hadda lagu rakibay boggeyga.
Apr 22, 2007 at 12: 16 PM
Waxaan helay codsiyo aad u tiro yar oo ah inay jiraan khaladaad ku saabsan qorista ama akhrinta faylka khasnadda. Xaqiiqdii waan gartay arrin meesha aan ku riixayo kuna jiidayo faylka keydka galka galka. Waxaan wax ka beddelay nooca 2.0.4 si ay ugu qorto cinwaan hoosaad keyd ah oo ku dhexjira galka kumbuyuutarka.
Fadlan ii sheeg sida ay u socoto! (Weli wuxuu ubaahanyahay SimpleXML iyo cURL!)